Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika: Tsy maintsy laniana ny lalàm-pifidianana
Politika: Tsy maintsy laniana ny lalàm-pifidianana
Voatery tsy maitsy miverina mivory indray ny antenimierampirenena ao Tsimbazaza manomboka androany zoma faha 23 martsa 2018. Izany dia nohon’ny fanapahankevitry ny filankevitrin’ny minisitra izay natao ny alarobia faha 21 martsa 2018.
Niarahana nahita fa tamin’ny alarobia faha 21 martsa 2018 teo no nifarana ny fivoriana tsy aram-potoana voalohany nataon’ny depiote tamin’ity taona ity izay nandinihana ny lalàm-pifidianana ity. Nazava ny vokatra azo ny safidin’ny depiote ireo fa nanana tombony roa ny depiote mpomba ny fitondrana teo anatrehan’ireo mpanohitra. Samy tsy nisy nahazo ny isa ilaina ho fandaniana izany lalàm-pifidianana izany ny andaniny sy ny ankilany satria 70 no azon’ny mpomba ny fanjakana raha toa ka 68 no azon’ireo mpanohitra. Ny isa ilaina handaniana ity lalàna ity nefa dia 76. Noho izany dia voatery tsy maintsy haverina ny fandaniana ity volavolan-dalàm-pifidianana hifehy ny fifidianana rehetra eto Madagasikara ity manomboka izao.
Ny alarobia teo dia nanambara tao amin’ny famarananana ny fivoriana ity ny filohan’ny antenimierampirenena Jean Max Rakotomamonjy fa rehefa vita ny fetin’ny paska dia miverina mivory indray depiote handinika indray ity lalàna ity. Raha ny fandaminana tao Tsimbazaza tao dia efa nozarraina hatramin’ny solika hodian’ireo depiote ireo any amin’ny toerana nahalany azy tsirairay. Raha niomana ny hanainga ny depiote ireo omaly maraina dia nahazo filazana avokoa fa androany zoma faha 23 martsa 2018 dia hiverina hivory fanindroany indray.
Mandeha ny resaka fa tsy maintsy laniana hatramin’ny alahady faha 25 martsa 2018 ny lalàam-pifidianana io. Midika izany fa tsy maintsy holany ity lalàm-pifidianana ity. Inona izany no hitranga satria mifandrirotra mafy ny roa tonta?
Ny loharanom-baovao faha indray no nahenoana fa noteren’ny komity iraisam-pirenena tsy maintsy mamoaka ny dati-pifidianana ny fanjakana alohan’ny fetin’ny paska izao, ka izany no anton’izao hazakazaka arahi-tosika izao.
Tsy azo atao nefa ny mamoaka ny datin’ny fifidianana io raha tsy lany ny lalàm-pifidianana ity.
Izany no ilazana fa tsy maintsy holaniana io lalàna ion a inona na inona hitranga.
Mahakasika izany indrindra dia matoky tena fatratra ny HVM (Hery vaovao hoan’i Madagasikara) sy ny mpomba ny fanjakana amin’ny fandreseny. Ny antony dia nisy ireo depiote izay tsy tonga nivory izay miisa 12 mianadahy. Ho tonga amin’io fivorianan io izy ireo ary matoky tena ny HVM fa hanampy ny isan’izy ireo izany. Depiote enina ihany amin’ireo 12 ireo no tadiaviny dia mahazo ny fandresena izy ireo.
Na izany aza dia mandeha dia mandeha ny fividianana olona amin’ny andaniny sy ny ankilany. Vinavinain’ny mpanaraka ny vaovao ho tafakatra hatrany amin’ny 150 millions FMG izany hoan’ny depiote iray raha toa ka 100 millions fmg tamin’iny fivoriana tsy ara-potoana voalohany iny.
Inona no hitranga raha toa ka ho lany ity lalàna ity? Manahy mafy ny Malagasy fa hiteraka korontana indray ny raharaham-pifidianana ankehitriny satria samy miseho azy ho be saina avokoa ny depiote mpomba an’i Hery Rajaonarimampianina sy Andry Nirina Rajoelina ary Marc Ravalomanana izay milaza azy ho samy mafibe ankehitriny. Ho hitantsika eon y tohiny.